इग्कारो - उत्तम स्रोतहरूको साथ ओरिगामी र ओरिगामी पाउनुहोस्
ओरिगामी या ओरिगामी
ओरिगामी ... कागजको प्लेन र धेरै असम्भव संख्या।
एकदम एक उपाध्यक्ष।
म सानो भएकोले मलाई ओरिगामी या ओरिगामीको कलामा रुचि छ। मलाई सम्झना छ कसरी मैले आफ्नो सेनाको लागि कागजको जहाजहरू, डु boats्गा र ट्याks्कीहरू बनाए। सानो छँदा मलाई यो मन पर्थ्यो।
तर हामी केवल जटिल मुद्दाहरूको बारेमा कुरा गर्दैनौं। हामी यो देखाउन चाहान्छौं कि घरका साना बच्चाहरूको लागि ओरिगामी एकदम सजिलो र आदर्श हुन सक्छ। बच्चाहरूको लागि ओरिगामी खोज्दै हुनुहुन्छ? म सेक्सन तयार गर्दैछु ताकि तपाईका बच्चाहरुले दर्जनौं संख्यामा संख्यात्मक संख्या बनाउन सकून्।
कागज विमानहरू, डु boats्गा, र अन्य धेरै मानिसहरू माझ।
मलाई लाग्छ कागज हवाइजहाज यो धनु टाईको साथ हुनुपर्दछ, यदि पहिलो हो भने ओरिगामी भएका कुनै व्यक्तिको पहिलो सम्पर्क होईन। यदि तपाई इच्छुक हुनुहुन्छ भने तपाई दर्जनौं प्रकारका कागज हवाइजहाजहरू बनाउन सक्नुहुन्छ, र बच्चाहरूलाई जब उनीहरूले एक बनाउन भन्छन् तब तपाईं छक्क पर्नुहुनेछ। मैले हवाइजहाजबाट सुरू गरें र धेरै प्रकारका कागज हवाई जहाजहरू बनाएको छु।
मेरा अन्य कमजोरीहरू, जसमा कम काम गरे पनि कागज जनावरहरू हुन्।
सधै जस्तो, धेरै फ्रन्टहरू अन्वेषण गर्न र सिक्नका लागि खोल्दछन्। तपाईंलाई ब्लगमा देखाउनको लागि धेरै जानकारीहरू छन् र तपाईं म यसको रूपमा आनन्द लिनुहुन्छ।
यदि तपाईं खोज्दै हुनुहुन्छ २०१ desk को लागि तपाइँको डेस्कको लागि पात्रो, राम्रो र सस्तो र निर्माण गर्न सजिलो छ dodecahedrons बनाउन यी मुद्रण योग्य टेम्प्लेटहरू जस्तो केहि पनि छैन। तपाईंले पहिल्यै सोचेको हुन सक्दछ, त्यहाँ नियमित बहुभुजको १२ अनुहारहरू छन्, प्रत्येक महिनाको लागि एक :) उनको दिनमा हामीले कुरा गर्यौं स्थायी पात्रो, जुन अर्को राम्रो विकल्प हो काठ, कागज वा गत्तामा राम्रो उत्पादन गर्नका लागि।
लेखमा सम्मेलनहरूका टेम्प्लेटहरू तल दिइएका छन् अनलाइन उपकरण, धेरै सहज र प्रयोग गर्न सजिलो। यो एक को बारे मा छ dodecahedron क्यालेन्डर जेनरेटर.
यो धेरै, धेरै सरल छ। तपाइँ दुई प्रकारका डोडेकेड्रा बीच छनौट गर्नुहुन्छ जुन यसले प्रस्ताव गर्दछ, क्यालेन्डरको वर्ष, भाषा, यदि तपाइँ हप्ता नम्बर देखा पर्न चाहनुहुन्छ वा चाहानुहुन्न भने जुन ढाँचा उत्पन्न हुन्छ, जुन PDF वा पोष्टस्क्रिप्ट र डाउनलोड हुन सक्छ।
कसरी स्टार वार स्नोफ्लेक्स बनाउन
यो क्रिसमस फरक हुन गइरहेको छ, मँ यो स्पष्ट छ। घरमा क्रिसमसको सजावट मेरो आफ्नै हो। ... पढ्न जारी राख्नुहोस्
यसका लागी ओरिगामी प्रेमीहरू वा ओरिगामी हामी free निःशुल्क प्रोग्रामहरू ल्याउँदछौं जुन थोरै अभ्यासको साथ तपाईंलाई अर्को स्तरमा लैजान्छ ... केहि यस्तो ओरिगामी जेदी
अघिल्लो खरायो के प्राप्त गर्न सकिन्छ को एक नमूना हो।
यो बारेमा छ
कागज ग्लाइडर कसरी बनाउने
अन्य विमान कागज हवाइजहाज स collection्कलनको लागि हामी अधिक बनाइरहेका छौं।
यो एक सरल छ कागजको ग्लाइडर
कागज पिनव्हील कसरी बनाउने
धेरै आधारभूत र सीधा, तर म यो लाग्छ ओरिगामी या ओरिगामी यो पिनव्हील बनाउनु जस्तै हुनुपर्दछ।
यो चित्रले वास्तवमा यसको जोड दिन्छ,
छवि लिइएको बाट Paliku को संसार
कसरी एउटा कागज क्र्याब बनाउने
धेरै लामो समय भएको छ जब हामीसँग एक ओरिगामी गतिविधि थियो, त्यसैले आज हामी तपाईंलाई ल्याउँछौं कसरी एउटा कागज क्र्याब बनाउने। हामी मुख्य रूपमा दुई प्रकारका क्र्याब मोडेलहरू फेला पार्दछौं। तपाईलाई सब भन्दा मन पराउनुहुनेलाई छनौट गर्नुहोस्। म प्रत्येकको धेरै भिडियो छोड्छु
[हाइलाइट] UPDATED। मैले २०१० मा पोष्ट गरेको मूल भिडियोहरू परिवर्तन गरें। आज धेरै धेरै र उत्तम भिडियोहरू छन्, र ती कागजका केकाहरूको बिभिन्न प्रकारका छन्। त्यसैले मैले लेख मनपराएँ कि केहि मेरो साथ। तिनीहरूलाई रमाउनुहोस् [/ हाइलाइट]
तर म तपाईंलाई चेतावनी दिन्छु कि यस गतिविधिको स्तर मध्यम-उच्च छ, त्यसैले निराश नहुनुहोस् ;-) भिडियोमा तपाईं यसको मोडेलिंगको लागि विस्तृत चरण चरणमा पाउनुहुनेछ। यदि तपाईं संलग्न हुनुहुन्छ वा स्पष्ट चरण छैन भने, तपाईं भिडियो रोक्न सक्नुहुन्छ। यो ठूलो सहयोग हो।
कसरी घर बनाउने कागज हेलिकप्टर बनाउन
धेरै हेलिकप्टर म लाग्छ कि यो एक कागज autogyro। तर म खुशी भए। हामी भन्न सक्दछौं कि यो नक्शाको बीउमा आधारित छ, तर त्यो पहिले नै मेरो मान्यताहरू हो।
कागजको उडान समयको लागि नयाँ गिनीज रेकर्ड
एन्ट्री ११-२-27-२०१ to लाई अद्यावधिक गरियो म यी बर्षहरूमा कागजको हवाइजहाजको उडानमा प्राप्त नयाँ रेकर्ड थप गर्दछु। रेकर्ड ... पढ्न जारी राख्नुहोस्
कागज बुमेरा make कसरी बनाउने
मिनी कागज बुमरै make कसरी बनाउने भनेर सिकाउन तीन भिडियोहरू।
धेरै सरल, तर यसले कार्य गर्दछ, यद्यपि मैले चेताउनी दिनुपर्दछ कि यसलाई पछाडि फ्याँक्नको लागि बाटो भेट्टाउन गाह्रो छ। काठको बुूमरेgs्ग वा अन्य विज्ञापन जस्ता परिणामहरू आशा नगर्नुहोस्, तर बैठकमा वा बच्चाहरूको लागि खेल खेल्नको लागि यो अनौंठो खेलको रूपमा धेरै राम्रो छ।
मैले करीव --० - cm० सेमी दायरा हासिल गरें। त्यसैले तपाईं यसलाई प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईं यसलाई ;-) लाई मात गर्न सक्नुहुन्छ कि
म तपाइँलाई धेरै धेरै भिडियोहरू छोड्छु, यद्यपि तिनीहरू मध्ये कुनैसँग यो पर्याप्त हुनेछ, किनकि गतिविधि कार्यान्वयन गर्न धेरै सरल छ, यद्यपि यो हासिल गर्न यति धेरै छैन। कागज बुमरै। तपाईंलाई फिर्ता
कागज स्पेसशिप कसरी बनाउने
हामीले पहिले नै देखिसकेका छौं कि कसरी कागजको जहाज, जहाजहरू र हाम्रो सेनाहरूको लागि ट्या tan्कीको मोडेल बनाउने। यी सबै संग ... पढ्न जारी राख्नुहोस्